UKhoza udalula ingwadla kwiPSL - Ilanga News
Home Izindaba UKhoza udalula ingwadla kwiPSL
UKhoza udalula ingwadla kwiPSL
Uthi ubona ubunzima obuzayo emuva kokuhoxa kwabaxhasi bePirates
BABHEKENE nengwadla abanikazi bamakilabhu agijima kwiPremier Soccer League (PSL) njengoba umnotho ubheke eweni ikakhulukazi eNingizimu Afrika lapho izinkampani ziwa ubuthaphuthaphu.
Lokhu kushiwo nguSihlalo we-PSL u-Irvin “Iron Duke” Khoza (osesithombeni) ngesikhathi ekhuluma neLANGA ngesimemezelo sabakwaGreyhound sokuthi sebethi khumu embonini yezokuthutha. IGreyhound ingabaxhasi abamqoka be-Orlando Pirates ephethwe nguKhoza.
IGreyhound imemezele nokuthi namabhasi abengaphansi kwayo, iCitiliner nawo azophuma emakethe yezokuthutha ngenxa yokubheda kwesimo somnotho esenziwe sanzima nakakhulu wukuvalwa kwezwe njengoba kubhidlange iCovid-19.
UKhoza uthe abantu abaningi kababuqondi ubunzima obubhekene nabanikazi bamakilabhu adlala kwiPSL njengoba entula abaxhasi. Uthi ukudayiswa kwawo ubuthaphuthaphu kudalwa wukuthi abanikazi bamakilabhu bathwele kanzima njengoba abanye bebhekene nokuwa kwamabhizinisi okuyiwona abebondla ngawo amakilabhu ebhola.
Uncome isinqumo sikahulumeni wakuleli sokuxegisa imithetho yokuhamba njengoba abantu sebevumelekile ukuba ngaphandle kusuka ngo-05h00 ekuseni kuze kube ngu-23h00. Uthi phambilini amakilabhu abephoqeleka ukubhukha amahhotela ngemuva kwemidlalo njengoba bekumele wonke umuntu ashayelwe yihora lika-21h00 esekwakhe. Uthi ukubhukha amahhotela kudla enkulu imali.
“Ukuhoxa kwabakwaGreyhound ekubambeni iqhaza kwezokuthutha kuleli yinto engazange ingethuse, bengiyilindele njengoba umnotho utshekile. Izinkampani zibhekene nobunzima njengoba ingekho imali engenayo (ngenxa yokuvalwa kwezwe) ekubeni izikweletu zikhula imihla namalanga.
“Empeleni ngibona kusekuningi kakhulu okunzima okuseza. Kusekuncane kakhulu lokhu esisakubonile. Yingakho nje ngihlale ngikugcizelela emhlanganweni namakilabhu ubumqoka bokusebenzisa imali ngendlela ehlelekile,” kusho uKhoza.
Uqhube ngokuzwakalisa ubuhlungu ababuzwayo njengoba imidlalo yabo ingahanjelwa ngabalandeli okubaphuca inkece abayithola ngokudayisa amathikithi.
“Amakilabhu abethembele kakhulu emalini etholakala ngokudayiswa kwamathikithi. Njengoba kuvaliwe nje, ukuhambela kwabalandeli imidlalo, sithwele kanzima. Okwenza isimo sibe sibi nakakhulu wukuthi abamabhanoyi kabenqeni ukwenyusa intengo yokuwagibela ngoba bayazi ukuthi sisuke sibadinga. Intengo bayenyusa sengathi bayaqhudelana,” kusho uKhoza.
Ukuhoxa kwabakwaGreyhound kulindeleke ukuba kushiye abashayeli abaningi bengenayo imisebenzi ekubeni beyibalwa nezinkampani ezikhokhela kahle kakhulu kuleli.
Besebeyibambe kule ndima iminyaka ewu-37 kanti bebedume kakhulu ngohambo oluphephile futhi olusezingeni eliphezulu.
IGreyhound neCitiliner bazogcina ukusebenza ngomhla ka-14 kwephezulu kanti abese bebhukhe ukuhamba ngala mabhasi emuva kwalolu suku banxuswa ukuba bashayele kwethi: 087-352-0352 noma bathumele i-email: refunds@greyhound.co.za ukuze babuyelwe yimali abesebeyikhokhile.
Previous articleUzimisele ngokuzikhandla uSlenda
Next articleI-ANC ayiliboni iphutha kuZuma